२०७५ वैशाख १८ गते मङ्गलवारको प्रतीक दैनिक
रिलिफको २७ औं वार्षिक समारोह, रामदेव साह कर्मवीर पुरस्कारबाट सम्मानित
प्रस, वीरगंज, १७ वैशाख/ रिलिफ सोसाइटी अफ कमर्सको स्थापना तथा वार्षिक समारोहको अवसरमा स्व. बिहारी लाठ कर्मवीर पुरस्कार वितरण भएको छ । वार्षिक समारोहको उद्घाटन गर्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेशसभा सदस्य ओमप्रकाश शर्माले बदलिदो समय अनुसार रिलिफ सोसाइटीले समाजमा काम गर्दै आएको बताए । उनले रिलिफ सोसाइटीले स्वास्थ्य क्ष्Fेत्रमा कान, आँखाको शिविर चलाउने र पिछडिएको वर्गका महिलाहरूलाई बर्सेनि सिलाइ मेसिन वितरण गरेर आत्मनिर्भर बनाएको बताएका थिए । कार्यक्रममा स्व. बिहारी लाठ कर्मवीर पुरस्कारबाट वीरगंज, बहुअरी निवासी रामदेव साह सोनारलाई सम्मानित गरिएको थियो । सो पुरस्कार २०७४ फागुनमा वितरण गरिनुपर्नेमा अस्वस्थताको कारण सोनार आउन नसकेपछि आजको कार्यक्रममा पुरस्कार वितरण गरिएको थियो । संस्थाका कोषाध्यक्ष सुनील खेतानले २०७४–७५ र २०७३–०७४ को आय–व्यय प्रस्तुत तथा आगामी योजनाबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । संस्थाका अध्यक्ष अशोककुमार लाठको सभापतित्वमा शुरु भएको कार्यक्रममा लायन्स क्लब अफ इन्टरनेशनलका निवर्तमान गर्भनरद्वय डा रामावतार खेतान र रमेश अग्रवाल, सुक्खा बन्दरगाहका प्रमुख
प्रदेश नं. २ को प्रस्तावित योजनाबारे छलफल गर्न केन्द्रीय टोली वीरगंजमा
प्रस, वीरगंज, १७ वैशाख/ नेकपा एमाले, पर्साको आयोजनामा पार्टी कायर्Fलयमा आज अन्तत्र्रिmया भएको छ । एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य डा. वंशीधर मिश्र, राष्ट्रियसभा सदस्य सुमन प्याकुरेलको केन्द्रीय टोली प्रदेश नं. २ मा आव २०७५–७६ मा प्रस्तावित योजनाबारे छलफल, विचार विमर्श गर्न आएको अवसरमा एमाले, पर्साले अन्तत्र्रिmया आयोजना गरेको थियो । अन्तत्र्रिmयामा एमाले, पर्साले जिल्लाको समृद्धि र विकासको लागि सयभन्दा बढी योजना तय गरी केन्द्रीय टोलीलाई बजेटमा अनुमोदन गराइदिन आग्रह गरेको थियो । सयवटा योजनामा भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत पुल, कलभर्ट, नाला, सडक निर्माणलगायत खेलकुद, स्वास्थ्य, शिक्ष्Fा, सिंचाइ, पर्यटन, कृषि, खानेपानी, सामाजिक सुरक्ष्Fालगायत विषय रहेका छन् । एमाले, पर्साका संयोजक प्रभु हजराले बताए अनुसार सयभन्दा बढी योजना तय गरिएको र त्यसमा प्रमुख ११ वटा योजनालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको बताए । उनले ११ योजनामा वीरगंजमा राजस्व न्यायाधिकरण, पोलिटेक्निक इन्जिनियर कलेज, कृषि प्राविधिक तालिम केन्द्र, वीरगंज विश्वविद्यालय घोषणा गर्नुपर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका थिए । यसै
सङ्घीय व्यवस्था र सामाजिक व्यवहार सुधारको सवाल
अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव सामाजिक व्यवहारलाई भडकिलो हुनबाट रोक्न र भोजभतेरबाट विकृतिको सिर्जना नहोस्, बढदो प्रतिस्पर्धात्मक तडकभडक रोक्न र फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ जारी भयो र सोही वर्षदेखि लागू भएको छ । यो ऐनले विवाह लगायतमा दाइजो ५१ रुपियाँभन्दा बढी को मालवस्तु लिन नहुने, ५१ जनाभन्दा बढीलाई भोजमा आमन्त्रण गर्न नहुने, जन्तीमा तडकभडक गर्न नहुने आतिशबाजी गर्न नहुने, ११ जनाभन्दा बढी बाजावाला लान नहुने, दश हजार रुपियाँभन्दा बढी दाइजो दिन नहुने, लगायत व्यवस्था गरेको छ । उपरोक्त प्रावधानविपरीत कसैले कुनै प्रकारको गतिवधि ग¥यो भने बढीमा ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र तीस दिनसम्म कैदको व्यवस्था गर्नुका साथै भोजभतेरमा गरेको खर्चको विवरण प्रमुख जिल्ला अधिकारीले माग्न सक्ने प्रावधान छ । विवरण नदिनेलाई सजायको व्यवस्था कानूनले गरेको छ । कानुनको यो व्यवस्था खर्च नियन्त्रण गर्न र समाजमा कसैले कसैलाई होच्याउने व्यवहार गर्नबाट रोक्न सकारात्मक भए पनि समयसापेक्ष नरहेको भन्नैपर्छ । झन्डै ४० वर्ष पहिले तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अवस्
समयमै चेत आओस् है
व्यापारिक मार्ग निर्माणमा बाराको जितपुरमा देखिएको मुआब्जाको विवाद तत्कालका लागि साम्य भएको छ । विवाद सुल्झिएलगत्तै पथलैयादेखि अलौमा रहेको आइसिपीसम्म ६ लेनको सडक निर्माणको कामले तीव्रता लिने भएको छ । सरकारले ०३४ सालभन्दा पहिले बनेका संरचना र खरिद गरिएको जग्गाको हकमा मात्र मुआब्जा दिन सक्ने बताएपछि सोही विषयमा सहमति बनेर अवरोध हटेर काम सुचारु भएको हो । सहमतिसँगै पथलैयादेखि अलौको आइसिपीसम्म सडकको दायाँबायाँ २५–२५ मिटर क्षेत्रफल खाली हुने भएको छ । जितपुरमा यस अघि सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको क्रममा एडिबीले चार लेनको सडक निर्माण गर्दा मुआब्जा दिएको थियो । आयोजनाको काम भएकोले राजमार्गभित्र पर्ने जग्गाको पनि १० हजारदेखि बढीमा १३ लाखसम्म मुआब्जा दिने काम भएको थियो । चारलेन सडक निर्माणमा मुआब्जा दिने तर ६ लेनको सडक विस्तारमा मुआब्जा किन नदिने भन्ने विषयमा जितपुरका बासिन्दाले विवाद गर्दै आएका थिए । हिजोदेखि जितपुरमा ०३४ साल अघिको संरचनाको लगत तयार हुँदैछ । सरकारले राजमार्गका लागि शुरुदेखि ५० मिटर क्षेत्रफल तोकेको छ । ५० मिटर सडकको क्षेत्रफल तोके पनि राजमार्गमा दुई लेनको सडक बनेकोले अन्य जग
२०७५ वैशाख १७ गते सोमवारको प्रतीक दैनिक
निरक्षर बालिकाहरूको सही तथ्याङ्क पेश गर्न आग्रह
प्रस, वीरगंज, १६ वैशाख/ युनिसेफ नेपालको सहयोग तथा सामाजिक संस्था जिल्ला समन्वय समिति, पर्साको आयोजनामा किशोरी शिक्ष्Fा कार्यक्रमको समीक्ष्Fा गोष्ठी आज सम्पन्न भएको छ । वीरगंज महानगरपालिकाको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय सरावगीले स्थानीय तहमा हुने सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिले लिनुपर्ने आवश्यक देखिएको बताए । उनले विद्यालय नजाने बालिकाहरूको लागि सञ्चालित किशोरी शिक्ष्Fा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनप्रति टिप्पणी गर्दै प्रमुख सरावगीले प्रदेश नं. २ तथा पर्सा जिल्लाको हकमा विद्यालय नजाने बालबालिकाहरूको तथ्याङ्क सच्याएर आउन आग्रह गरेका थिए । अहिलेसम्म आपूm सहभागी भएको कार्यक्रममा फरक–फरक ढङ्गले तथ्याङ्कहरू आउने गरेकोमा उनले दुःखेसो व्यक्त गरे । प्रमुख सरावगीले गैरसरकारी संस्थाहरूले एक्लै बालबालिकाको सेक्टरमा काम नगरी नेपाल सरकारको भर्ना अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह गरे । उनले अभिभावकको कारण बच्चाहरू विद्यालयबाट वञ्चित हुने गरेकाले त्यस्ता अभिभावकलाई चेतनशील बनाउने कार्यक्रम आवश्यकता रहेको औंल्याए । वि
व्यापारिक मार्ग विस्तारको अवरोध हटाउन जीतपुरका अगुवा सक्रिय
प्रस, पथलैया, १६ वैशाख/ पथलैया–वीरगंज सडकखण्डमा निर्माण भइरहेको ६ लेनको व्यापारिक मार्ग विस्तारका क्रममा जीतपुरमा देखिएको समस्या समाधान गर्न जीतपुरका अगुवा सक्रिय भएका छन् । स्थानीयले क्षतिपूर्तिको माग राखेपछि जीतपुर बजारको करिब एक हजार एक सय मिटर क्षेत्रमा सडक विस्तार कार्य प्रभावित हुन पुगेपछि स्थानीय अगुवाहरू समन्वयमा जुटेका हुन् । स्थानीय जनप्रतिनिधि र जीतपुरका स्थानीय अगुवा जुटेपछि जीतपुर बजार क्षेत्रको समस्या समाधानको नजिक पुगेको हो । स्थानीयले राखेको मागका कारण सडक विस्तारको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । सडक विस्तारका लागि वातावरण सहज बनाउन जीतपुरसिमरा उपमहानगर र व्यापारिक मार्ग आयोजनाको कार्यालय पटकपटक स्थानीय अगुवासँग छलफल गरिरहेको थियो । छलफलका क्रममा २०३४ सालभन्दा अघि निर्माण भएका घरटहराको क्षतिपूर्ति दिन सकिने व्यवस्था ऐनमा रहेको र त्यसबाहेक अन्यको हकमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नरहेको आयोजनाको कार्यालयले स्पष्ट पारेपछि स्थानीय अगुवाहरू राजमार्ग विस्तारको पक्षमा देखिएका हुन् । यसअघि वैदेशिक अनुदानमा जीतपुर बजारमा चार लेनको सडक निर्माण हुँदा क्षतिपूर्ति पाएको भन्दै
नाउक्षे अस्पतालमा मौन विरोध, सरकारले अनुदान दिए मूल्यवृद्धि फिर्ता – अध्यक्ष गुप्ता
प्रस, वीरगंज, १६ वैशाख/ नाउक्षे अस्पतालले दुई महिना अघि गरेको शुल्कवृद्धिको विषयलाई लिएर मौन विरोध भएको छ । विभिन्न सङ्घसंसथाहरूको अगुवाइमा शुल्क वृद्धि गर्न नपाइने नारा लेखी पोस्टर झुन्ड्याई २ घण्टासम्म प्रदर्शन भएको थियो । शुल्क वृद्धि फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने र आन्दोलनको प्रकृति फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने महिला समाजसेवी मोनिका सिंहले जानकारी गराइन् । यस विषयमा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष्F विनोद गुप्ताले शुल्क वृद्धि गर्नु बाध्यता भएको जानकारी गराएका थिए । बढ्दै गएको खर्च, सेवा वृद्धिसँगै कर्मचारीहरूको तलब दिनसमेत समस्या भएकोले न्यूनतम शुल्क वृद्धि गरेको जानकारी गराएका थिए । शुल्क वृद्धि रहरले गरेको होइन, सरकारले अनुदान दिए शुल्क वृद्धि फिर्ता लिने उनले बताएका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्योकुसिन कराँते प्रतियोगिता सम्पन्न
प्रस, वीरगंज, १६ वैशाख/ नेपाल सेकाई क्योकुशिन कराँते बारा, चैनपुरले डिएभीआरबी. केडिया स्कूल, परवानीपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय क्योकुसिन कराँते प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको छ वैशाख १४ र १५ गते सम्पन्न प्रतियोगितामा नेपाल, भारत तथा भुटानका खेलाडीहरू भाग लिएका थिए । प्रतियोगिताको पुरूषतर्पm १० देखि १२ वर्ष उमेर समूहमा अभय राउत प्रथम, शम्साद अन्सारी दोस्रो, चन्दन पटेल तेस्रो भएका थिए भने पुरूषोत्तम बस्नेत वेस्ट फाइटरको उपाधि पाएका थिए । यसैगरी महिलातर्फ १० देखि १२ वर्ष उमेर समूहमा स्नेहा महतो प्रथम, प्रिया सिंह दोस्रो, विनिता मण्डल तेस्रो तथा लामिशा सिद्दिकीले वेस्ट फाइटरको उपाधि पाएका थिए । पुरूषतर्फ १२ देखि १४ वर्ष उमेर समूहमा आकाशकुमार साह प्रथम, गोविन्द गौतम चौहान दोश्रो, रामेश्वर पटेल तेश्रो तथा प्रमोद राउत वेस्ट फाइटरको उपाधि प्राप्न गर्न सफल भएका थिए भने महिलातर्फ १२ देखि १४ वर्ष उमेर समूहमा अस्मिता जयसवाल प्रथम, मुस्कान कुमारी दोस्रो, अञ्जना वाइवा तेस्रो तथा अनिशा जयसवालले वेस्ट फाइटरको उपाधि प्राप्त गर्न सफल भए । पुरूष ४५ केजीतर्फ मुनि विशाल माझी प्रथम, हिमांशु याद
विद्यालय र केटाकेटीको भाषा
अनन्तकुमार लाल दास विद्यालय र केटाकेटीबारे चिन्तन गर्दा औपचारिकता र अनौपचारिकताको विरोधाभास उत्पन्न हुन्छ । एउटा छविमा औपचारिकता निहित छ भने अर्कोमा अनौपचारिकता । ‘विद्यालय’ त्यो ठाउँ हो, जहाँ योजनाबद्ध तरिकाले शिक्षा प्रदान गरिन्छ । जहाँ एउटा निश्चित ‘पाठ्यक्रम’ हुन्छ, कक्षाहरू हुुन्छन् । ती कक्षाहरूमा बेग्ला–बेग्लै विषयहरूको ज्ञान केटाकेटीहरूलाई दिइन्छ । जहाँ केही नियमको पालना अनिवार्य हुन्छ । एउटा विशेष भाषाको प्रयोग र सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिन्छ । जहाँ उनीहरूसँग एक प्रकारको विशेष व्यवहार गरिन्छ र त्यहाँ हुने सम्बन्ध पनि औपचारिकताको सीमामा बाँधिएको हुन्छ । अर्कोतिर केटाकेटीहरूमा अनौपचारिक भाव देखा पर्छ । चाहे भाषा प्रयोगको कुरा होस् वा व्यवहारको, केटाकेटीहरू नियम र योजनाबद्ध ज्ञानार्जनको सीमाभन्दा माथि उठ्न रुचाउँछन् । उनीहरू कुनै प्रकारको सीमामा नबाँधिने आभास दिन्छन् । अर्को शब्दमा, उनीहरूको आआप्mनै नियम, व्यवहार र योजना हुन्छ, जसबाट औपचारिकताको बनोट भत्काउने प्रयास भइरहेको अनुभूति हुन्छ । औपचारिकता र अनौपचारिकताको यस द्वन्द्वमा भाषाको कुरो पनि अहम् छ । यस प्रकारको द्वन्द
हालै एउटा कार्यक्रममा पर्सा जिल्लामा दुव्र्यसनीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा अढाई हजारको हाराहारीमा लागू औषध र लागू पदार्थसेवी देखिएका छन् । ज्ञातव्य छ, लागू पदार्थ भनेपछि गाँजा, अफिम, चरेस तथा यी पदार्थजन्य कडा रसायनहरू पर्दछन् भने लागू औषध भनेपछि रोग निवारणका लागि दिइने तर नशालू औषधि पर्दछन् । लागू पदार्थ नेपालबाट भारततिर पठाइने र लागू औषध भारतबाट नेपाल भिœयाउने गरिन्छ । लागू औषध भनेपछि भारतमा प्रतिबन्धित छैन । हो, कुनै विशेषज्ञ डाक्टरको अनुमति वा प्रेस्क्रिप्सनबिना यस्ता औषधि बेच्न भने अवश्य प्रतिबन्ध छ । तर नाफाको लोभमा औषधि पसलेहरूले यस्ता औषधि मज्जले बेच्छन् । सामान्यतया दुःखाइ कम गर्न, रुघाखोकी लागेको बेला, अपरेशन अघि वा अपरेशन भएपछि दर्द निवारक औषधिहरू दिइन्छ । यस्ता औषधिहरूको प्रभाव नशादार हुन्छ । र यिनै नशादार औषधि खरिद गरेर नेपालका दुव्र्यसनीहरू प्रयोग गर्छन्, जुन नेपाल–भारत सीमान्त शहरहरूमा निर्धक्क किन्न पाइन्छ । नशाको प्रयोग मानिसले किन गर्छ, यसबाट उनीहरूलाई के प्राप्त हुन्छ, त्यसबारे लामो बहस चल्न सक्छ । प्रा
२०७५ वैशाख १६ गते आइतवारके प्रतीक दैनिक
खुम्चिदै ऐतिहासिक ५२ बिघाको मानवनिर्मित झरोखर पोखरी
गम्भीरा सहनी, जीतपुर, १५ वैशाख/ बाराको ऐतिहासिक क्षेत्र सिम्रौनगढको मानव निर्मित ५२ बिघामा पैmलिएको झरोखर पोखरी पछिल्लो दिनमा खुम्ंिचदै आएको छ। बढ्दो अतिक्रमण र मरम्मत सम्भारको अभावमा ५२ बिघाको पोखरी खुम्चिएर २२ बिघामा आएको छ। नेपाल–भारत सिमानाको १० गजा सँगै जोडिएको यो पोखरी लगभग आठ सय वर्ष पुरानो मानिन्छ। पछिल्लो समय यस पोखरीलाई नेपाली तथा भारतीय पक्षले थिचोमिचो गर्दैै आएका छन्। दुवै पक्षबाट पोखरीका छेउछाउमा गाईभैंसी बाँध्ने, ससाना घरटहरा बनाउने र पोखरीको माटो काट्ने जस्ता काम भइरहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। तत्कालीन अवस्थामा यो पोखरी कृत्रिम तरिकाले निर्माण गरेको पाइन्छ। केही वर्षअघिसम्म पोखरीका डिलमा विभिन्न जातका आँप, कटहर, लिच्ची जस्ता विभिन्न फलपूmलका रूखहरूको घना जङ्गलजस्तो देखिने बगैंचा पनि हालका दिनमा पातलिंदै गएको छ। यो पोखरी गुठी संस्थान वीरगंजको मातहतमा रहे पनि २०३५ सालदेखि गाविस कचोर्वाले ठेक्का लगाइ आम्दानी लिने गरेको छ। पोखरीवरिपरि अवस्थित बगैंचा र माछापोखरी ठेक्काबाट बर्सेनि केही रकम आय आर्जन हुने देखिए पनि पोखरीको संरक्षण र संवद्र्धनतर्पm कस
मुस्लिम समुदायले दाइजोको रोग फैलाउनुहुँदैन
प्रस, परवानीपुर, १५ वैशाख/ पर्साका मुस्लिम समुदायले दाइजोजस्तो सामाजिक विकृतिलाई न्यूनीकरण गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ। मदर्सा अर्गनाइजेसन अफ नेपालले वीरगंज–३ छपकैयास्थित एमइएस स्कूलमा आयोजना गरेको दाइजोविरुद्धको अभियान कार्यक्रममा मुस्लिम समुदायका अगुवाहरूले सामाजिक विकृतिका रूपमा रहेको दाइजो न्यूनीकरण गर्न प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए। कार्यक्रममा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता नुरुल होदाले जुन मुसलमानसँग इमान छैन, ऊ मुसलमान हुन नसक्ने बताउँदै मुसलमान समुदायमा पनि दाइजोले जरो गाड्दै गइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। उनले मुस्लिम समुदायमा दाइजोको चलन नरहेपनि अहिले बिस्तारै यो समुदायमा पनि दाइजो लिनेदिने कार्य भइरहेको भन्दै सामाजिक विकृतिविरुद्ध सबै सचेत हुन जरुरी रहेको बताए। उनले दाइजो लिनेदिने जस्तो इमानमा प्रश्न लाग्ने घृणित कार्य नगर्न सुझाव पनि दिए। उनले दाइजो लिनेदिने कार्यले इस्लाम धर्मलाई कठघेरामा खडा गरेको तर्क दिए। अधिवक्ता सुरेन्द्र कुर्मीले शिक्षित समुदायले ठूलोरूपमा दाइजो लिनेदिने गरेको आरोप लगाए। उनले अशिक्षाको कारण दाइजो मौलाएको उदाहरण अबका दिनमा गौण
प्रहरीसँग ज्येष्ठ नागरिक अभियान
रवीन्द्र साह, कलैया, १५ वैशाख/ जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले दश दिने ज्येष्ठ नागरिक भेटघाट कार्यक्रम अन्तर्गत शनिवार दुईवटा वडामा ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग भेटघाट गरी उनीहरूको गुनासो सुनेको छ। कलैया उपमहानगर वडा नं ३ र ४ मा १० जना ज्येष्ठ नागरिकसँग प्रहरीले संयुक्तरूपमा भेटघाट गरी उनीहरूको गुनासो सुनेको जिप्रका बाराले जनाएको छ। सो अवसरमा प्रहरीले फलपूmल पनि वितरण गरेको थियो। जिप्रका बाराले वैशाख ९ देखि १८ गतेसम्म यो अभियान कलैया उपमहानगरको सहयोगमा सञ्चालन गरिरहेको छ। जिप्रका बाराले २ उपमहानगर, ५ नगरपालिका र ९ गापाका ८५० जना ज्येष्ठ नागरिकसँग भेटघाट गरी उनीहरूको गुनासो सुन्ने र जिल्लालाई ज्येष्ठ नागरिकमैत्री बनाउने अभियान सञ्चालन गरेको जिप्रका बाराका प्रवक्ता प्रनाउ भुवनेश्वर साहले बताए। ज्येष्ठ नागरिकहरूको पीरमर्का, उनीहरूको पालनपोषण र औषधि उपचार आदिका बारेमा सोधखोज गर्ने र समस्या देखिएकाहरूको हकमा घरपरिवारका सदस्यलाई सम्झाउने बुझाउने काम अभियानका क्रममा गर्ने प्रवक्ता साहले बताए। बारा प्रहरीले ज्येष्ठ नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि सञ्चालित अभियानमा सहयोग पु¥याउन सर्
ट्राइयथलनमा मणिचन्द्र र समीराले जिते स्वर्ण
पोखरा, १५ वैशाख/रासस भारतीय खेलाडी मणिचन्द्र सिंह र समीरा मारिहाम अब्राहमले छैटौं दक्षिण एसियाली ट्राइयथलन च्याम्पियनशिपमा प्रथम स्थान हात पार्दै स्वर्ण पदक जित्न सफल भएका छन्। ट्राइयथलन अन्तर्गतको स्प्रिन्ट विधाको पौडी ७५० मिटर, साइक्लिङ १० किमी र दौड पाँच किलोमिटरको दूरी मणिचन्द्रले ५८ मिनेट दुई सेकेन्डमा पूरा गर्दै स्वर्ण हात पारेका हुन्। भारतकै विश्वरजित साइखाम ५९ मिटर ५७ सेकेन्डका साथ रजत र नेपालका बसन्त चौधरीले एक घण्टा एक मिनेट दुई सेकेन्डका साथ कास्य पदक हात पारे। महिलातर्पm उक्त दूरी समीराले एक घण्टा चार मिनेट ५० सेकेन्डमा पूरा गरिन्। दोस्रो भएकी भारतकै प्रग्न्या मोहनले एक घण्टा आठ मिनेट र ४२ सेकेन्ड र तेस्रो भएकी नेपाली खेलाडी सोनी गुरुङले एक घण्टा १३ मिनेट आठ सेकेन्डमा पूरा गरिन्। प्रतियोगिताको खुला पुरुषतर्पm पनि तीनैजना खेलाडी मणिचन्द्रले स्वर्ण, विश्वरजितले रजत र बसन्त चौधरीले कास्य पाए। महिलातर्पm स्पेनकी ईश्वराले स्वर्ण हात पारिन्। उनले उक्त दूरी एक घण्टा तीन मिनेट ३४ सेकेन्डमा पूरा गरेकी हुन्। दोस्रो स्थानमा भारतकी समीरा र तेस्रो स्थानमा प्रग्न्य
कसरी हुन्छ चित्तलाई वस्तुको ज्ञान ?
अन्तर्यात्रा विज्ञानको प्रयोगले चित्तलाई राग–द्वेषबाट मुक्त गर्छ। यस्तो भएपछि न कसैसँग प्रीति हुन्छ र न बैर । सबैप्रति समान भाव हुन्छ। अन्तश्चेतनाले सहजै सबैसँग आप्mनोपनको आनन्द अनुभव गर्छ। निन्दा र स्तुति, बच्चाको तोतेबोली बन्न पुग्छ। यसबाट केही बेरको लागि मनोरञ्जन त हुन्छ, तर यसमा कुनै अर्थगाम्भीर्यको अनुभूति हुँदैन। निन्दा सुनेर न मन खिन्न हुन्छ र स्तुति सुनेर न कुनै प्रसन्नताको अनुभूति हुन्छ। यस्तो अवस्थामा इन्द्रियहरूले वस्तु, दृश्य अथवा घटनाक्रमसँग परिचय त अवश्य गराउँछ, तर यस परिचयबाट भावनात्मक विक्ष्Fोभ अथवा वैचारिक द्वन्द्वको स्थिति बन्दैन। अन्तश्चेतनामा सतत् यो अनुभूति बनिरहन्छ कि आसक्तिको साथ पाइने ज्ञानले सधैं नै अन्तश्चेतनामा मलको परत जमाउँदै जान्छस जबकि राग–द्वेषविहीन अवस्थामा पाइने ज्ञानले प्रत्येक अवस्थामा योगसाधकको अन्तश्चेतनालाई निर्मल गर्छ । यो सर्वविदित छ, चित्त एवं वस्तुको सम्बन्धले नै चित्तलाई वस्तुको ज्ञान दिन्छ । यसको बिना दृश्य वस्तु कुनै एक चित्तको आधीन हुँदैन, किनभने जब त्यो चित्तको विषय बन्दैन, तब त्यस समय त्यस वस्तुको के हुनेछ ? अर्थात् त्यो वस
भ्रष्टाचारको आहालमा सुशासनको खोजी
ओमप्रकाश खनाल अहिले राजनीतिमा निकै चल्तीका शब्द केही छन् भने ती हुन्– सुशासन र समृद्धि। सत्ता सञ्चालकदेखि विज्ञहरूको बहससमेतमा यिनै शब्दहरूको आलाप सुन्न पाइन्छ। मानौं, सुशासन र समृद्धिको उच्चारणबिना अभिव्यक्तिको पूर्णता सम्भव छैन। तर सामाजिक आयामहरूमा भ्रष्टाचारको गहिराइ कतिसम्म छ भनेर बुभ्mन पनि त्यति असजिलो पर्दैन। अर्थराजनीतिमा सत्ता सञ्चालकहरू नै प्रत्यक्ष/परोक्षरूपमा भ्रष्टाचारको संरक्षक बनेर उभिएका दृश्यको कमी छैन। सुशासनको प्रत्याभूति राज्यको प्राथमिक आधार हुनुपर्ने हो। नेतृत्व यसको प्रत्याभूतिलाई लोकप्रियता आर्जनको तुरूप बनाइराखेको दृश्यावलीले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवयवहरूमा भ्रष्टाचारको ओज आँकलनलाई थप सहज तुल्याइदिएको छ। सुशासनको प्रत्याभूति आजको विश्वमा एक चुनौती बनेर उभिएको छ । विश्वका ६८ प्रतिशत देश भ्रष्टाचारको गम्भीर समस्यासँग जुधिराखेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालमा नेतृत्वले सुशासनका गफ जति नै दिए पनि तथ्याङ्कले त्यसलाई लोप्पा खुवाइराखेको छ। हामीकहाँ भ्रष्टाचारको आँकडा बर्सेनि उकालो लागेको देखिएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलक
२०७५ वैशाख १५ गते शनिवारको प्रतीक दैनिक
पर्सामा बढ्दैछ, दुव्र्यसनीको सङ्ख्या
प्रस, वीरगंज, १४ वैशाख/ जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साद्वारा शुक्रवार आयोजित लागूऔषध रोकथाम अभियान विषयक एक दिने अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा सहभागीहरूले प्रहरीको सक्रियताकै कारण पर्साबाट गाँजाखेती निर्मूल भएजस्तै प्रहरीले चाहने हो भने समाजबाट आपराधिक क्रियाकलाप धेरै हदसम्म न्यून गर्न सकिने बताए। सहभागीहरूले पर्साबाट लागूऔषध गाँजाको खेती समाप्त भएपनि अहिले पर्सा जिल्ला गाँजा ओसारपसारको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बन्दै गइरहेको आरोप लगाए। मकवानपुरको विकट क्षेत्रमा गाँजाखेती भई सो गाँजा पर्साको उत्तरी भेगबाट भित्रिई पश्चिमी भेगबाट बाहिर जाने कार्य जारी रहेको बताए। प्रहरीको प्रत्यक्ष मिलेमतोमा गाँजाको ओसारपसार भइरहेको स्थानीय तहका प्रमुखहरूको भनाइ थियो। आप्mनै गाउँ भएर तस्करहरूले गाँजाको ओसारपसार गर्दा पनि प्रहरीले अहिलेसम्म केही गर्न नसकेको उनीहरूको आरोप थियो। गाँजासहित अहिलेसम्म भरियाबाहेक नाइके नसमातिनुमा प्रहरीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको उनीहरूको भनाइ थियो। भरिया समातेपछि प्रहरीलाई सबै जानकारी भएपनि नाइकेलाई बचाउँदा गाँजाको ओसारपसार नियन्त्रण हुन नसकेको उनीहरूको तर्क थियो। प्रहरीले
बालविवाह गराउन खोज्ने प्रहरी पक्राउ
प्रस, वीरगंज, १४ वैशाख/ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साले बालविवाह गराउन खोजेको कसूरमा एकजना प्रहरीलाई नै नियन्त्रणमा लिएर कारबाई शुरु गरेको छ। जिप्रका, पर्साले जनाए अनुसार भोटेचौर, सिन्धुपाल्चोक दरबन्दी भएर पर्सा जिल्ला वीरगंज–२७ उदयपुर घुर्मीमा कार्यरत प्रहरी जवान बुलेट यादवले आप्mना दुई दाइहरूको विवाह नाबालिगसँग गराउन खोजेको कसूरमा पक्राउ गरिएको हो। सूचनाको आधारमा हिजो हुन लागेको विवाहस्थलमा प्रहरी पुग्दा केटा र केटी बेपत्ता भएका थिए। उदयपुर घुर्मी निवासी ३५ वर्षीय सुरेशप्रसाद यादव र निजका भाइ ३२ वर्षीय करिमन यादवको बारा जिल्लाका ११ वर्षीया र १३ वर्षीया नाबालिगसँग वैवाहिक कार्यक्रम तय भएको सूचनाको आधारमा प्रहरीले सो गाउँमा छापामारी गरेको थियो। बालविवाहको लागि सम्पूर्ण तयारी गरिएको प्रहरीले सूचना पाएपछि छापामारी गर्दा दुवै पक्ष बेपत्ता भएका थिए। तर केटाका भाइ प्रहरी जवान बुलेट यादवले प्रहरी भएको धाकमा स्थानीयहरूलाई उक्साएको कारण जिप्रका, पर्साले निजलाई पक्राउ गरेको बताएको छ। पक्राउ परेका यादवविरुद्ध आवश्यक कारबाई हुने सो कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प
पत्रकार महासङ्घको ताला सवा दुई वर्षपछि खुल्यो
प्रस, वीरगंज, १४ वैशाख/ नेपाल पत्रकार महासङ्घ, बारामा लागेको ताला दुई वर्ष तीन महिनापछि आज शुक्रवार खोलिएको छ। नेपाल प्रेस युनियन, बाराले सदस्यता वितरणलगायतका विषयमा आपत्ति जनाउँदै तालाबन्दी गरेको थियो। लामो समयसम्म विवाद साम्य हुन नसक्दा तालाबन्दी खुलेको थिएन। नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश नं २ को निर्वाचनमा नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टरको संयुक्त प्यानल निर्माण भएपछि आज संयुक्त सहमतिमा तालाबन्दी खुलेको हो। प्रदेशसभामा अध्यक्षका उम्मेदवार दीपेन्द्र चौहान, उपाध्यक्षका उम्मेदवार केसी लामिछाने, प्रेस चौतारीका उपाध्यक्ष लालबाबू शेख, प्रेस युनियनका गुरु गौतम, उपेन्द्र यादव, मुकेश यादव, पत्रकार महासङ्घ, बाराका अध्यक्ष कमल उपाध्यायलगायतको उपस्थितिमा सहमति भई ताला खोलिएको हो।
नयाँ श्रम ऐन रोजगारदातामुखी छैन–सांसद बिडारी
प्रस, परवानीपुर, १४ वैशाख/ राष्ट्रियसभा सदस्य अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले गत भदौ १९ गतेदेखि लागू भएको श्रम ऐन २०७४ रोजगारदातामुखी नभई श्रमिकमुखी भएको बताएका छन्। नेशनल बिजनेश इनिसियटिभ (एनबिआई) र वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घको संयुक्त आयोजनामा वीरगंजमा आयोजित अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा उनले जारी श्रम ऐनले श्रमिकवर्गलाई सङ्गठित, बलियो, जिम्मेवार बनाउनुका साथै रोजगारदातामा आर्थिक व्ययभार थपेको तर पुरानै शैलीमा राखेको पनि टिप्पणी गरेका थिए। नयाँ श्रम ऐन अनुसार एक दिन मात्रै शारीरिक वा बौद्धिक कसैलाई कुनै रोजगारदाताले काममा लगाएको थाहा भयो भने त्यसलाई रोजगारमा लगाएको बुझिनेछ । बिदा, सञ्चयकोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, स्वास्थय बिमा, दुर्घटना बिघा, उपदान तथा आधारभूत पारिश्रमिक जस्ता व्यवस्थामा धेरै महŒवपूर्ण नियम ल्याइएको उनले बताए । त्यस्तै, स्वास्थ्यसम्बन्धी सुरक्षा, कार्यस्थलमा अपनाउनुपर्ने सुविधा तथा सामूहिक सौदाबाजीको सम्बन्धमा पनि राम्रो व्यवस्था ऐनमा ल्याइएको उनले बताए। यता, रोजगारदाताको लागि श्रमिक कटौती र १४४ को दफा अनुसार श्रमिकलाई हायर एन्ड फायर गर्न सकिने वा अनुसन्धान वा कारब
मजदुर दिवसको अवसरमा रक्तदान सम्पन्न
प्रस, वीरगंज, १५ वैशाख/ अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासङ्घ पर्सा र बाराको संयुक्त आयोजनामा शुक्रवार वीरगंजको घण्टाघरमा सम्पन्न रक्तदान कार्यक्रममा ७ महिलासहित ७५ जनाले रक्तदान गरेका रक्त सञ्चार केन्द्र वीरगंजका प्रमुख प्रवीण मानन्धरले बताए । १२९औं अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमको शुभारम्भ अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासङ्घ पर्साका अध्यक्ष लालबहादुर कुर्मी र बाराका अध्यक्ष मीनप्रसाद आपागाईंले रक्तदान गरी गरेका थिए। कार्यक्रममा सङ्गीता देवी, मुकेश सहनी, अजय पटेल, अजय साह, अनिल मानन्धर, रहिम अन्सारी, रामराज दास, राजकुमार गुरुङ, दीप वाग्ले, राजेन्द्र यादव, नेत्रप्रसाद पौडेल, राजु चौलागाईंलगायतले रक्तदान गरेका थिए । कार्यक्रममा रक्त सञ्चार केन्द्र वीरगंजका सुनील चौधरी, सुशील साह, ऋषभ अधिकारी र अखिलेश साहले प्राविधिक सहयोग पु¥याएका थिए ।
सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यम– कमाइखाने धन्दा मात्रै
वैद्यनाथ ठाकुर कुनै पनि देशको विकासको पूर्वाधारको रूपमा पहिलो नम्बरमा शिक्ष्Fालाई लिने गरिन्छ। मानव समाजको विकास पनि सभ्य मानव र आधुनिक मानव बन्ने दिशातिर नै अभिलक्षित रहेको छ। मानिसमा शिक्ष्Fाको अभाव जति धेरै हुन्छ, त्यति धेरै उसको बोलीचाली, व्यवहार तथा एकार्कालाई हेर्ने दृष्टिकोणसमेत घटिया अर्थात् नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थले भरिएको मात्र हुन्छ। यस्तोमा समाजमा अन्धविश्वास, आग्रह–पूर्वाग्रहले राज गरेको हुन्छ। जसलाई सभ्य भाषामा अविकसित वा पिछडिएको भन्ने गरिन्छ। यसर्थ शिक्ष्Fा समयानुकूल हुनु जति जरुरी छ, त्यति नै नैतिकवान् बनाउने, कर्तव्यको बोध गराउने तथा जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्ने दिशातिर स्पष्टताको साथ अगाडि बढेको हुनुपर्छ। अनिमात्र हाम्रो समाजको निधारमा लागेको असभ्य र अविकसित नामक कलड्ढ पखाल्न सकिन्छ। यतिबेला हाम्रा विद्यालयहरूमा शिक्षाको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ। खासगरी सामुदायिक विद्यालयहरूमा जहाँ प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गरिन्छ तर ती सबै लगानी बालुवामा पानीसरह हुन गएको कुरा सर्वविदितै छ। आखिर यस्तो हुनुको कारण के हो ? यति बेला आठ कक्ष्Fामा
सार्थक प्रयासको थालनी
सरकारले चलाएको यस वर्षको विद्यार्थी भर्ना र अभिभावकत्व ग्रहण अभियान अन्तिम चरणमा छ। वैशाख १ गतेदेखि सञ्चालित यो अभियान शुक्रवारसम्म चल्यो। यसो त वैशाख १५ गतेसम्मको यो अभियानको अन्तिम दिन शनिवार परेकोले शुक्रवार सकिएको हो। सरकारको यो अभियानमा प्रदेश सरकारहरू पनि उत्तिकै चासो लिएर लागेको पाइयो। अझ प्रदेश नम्बर दुई त झनै गम्भीर भएर सरकारसँगै होस्टेमा हैंसे गर्दै यो अभियानलाई सार्थकता प्रदान गर्न कसिएर लागेको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सरकारको यो अभियान आप्mनो प्रदेशका लागि झनै महŒवपूर्ण भएको ठानेर ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ नाराका साथ भर्ना र अभिभावकत्व ग्रहण अभियानमा लागिप¥यो। प्रदेश नं. २ को साक्षरता अभियान अन्य प्रदेशको तुलनामा कमजोर छ। देशका कुल ४ लाख बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेकामा आधा बालबालिका अर्थात् दुई लाख बालबालिका यो प्रदेशमा विद्यालय बाहिर छन्। झन् त्यसमा बालिकाहरूको सङ्ख्या बढी छ। सबैखाले बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच बनाउनका लागि सरकारले विगत केही वर्षदेखि कक्षा दशसम्म निश्शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ। तर पनि ठूलो सङ्ख्यामा बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर किन छन् त ? उ
प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय क्योकुसिन कराँते शुरु खेलकुदको विकास हामी सबैको दायित्व –सांसद साह
वीरगंज, १४ वैशाख। सांसद ज्वालाकुमारी साहले खेलकुदको विकास गर्नु हामी सबैको दायित्व भएको बताएकी छन्। शुक्रवार नेपाल सेकाई क्योकुशिन कराँते सङ्घ बारा, चैनपुरले परवानीपुरस्थित डिएभीआरबी केडिया स्कूलमा आयोजना गरेको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय क्योकुशिन कराँते प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि साहले वीरगंजले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलकुदहरू गर्नुपर्ने बताइन्। उनले खेलकुदका साधनस्रोतको अभाव नभए पनि त्यसको संरक्षण हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरिन्। खेलकुद मैदान व्यवस्थित गर्न तथा खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताइन्। नेपालकै दोस्रो नारायणी रङ्गशाला जीर्ण हुँदै गएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै उनले खेलकुद मैदानहरूको संरक्षणमा सरकारले जोड दिनुपर्ने बताइन्। क्योकुशिन कराँते सङ्घका सचिव भिखारी साहको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा राजपाका नेता शिव पटेल, वीउवासङ्घका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडियालगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। वैशाख १४ र १५ गते हुने प्रतियोगितामा नेपाल, भारत र भुटानका खेलाडीहरू सहभागी छन्। प्रतियोगिताका निर्णायकहरूम
वैष्णव अन्तर्गतका निम्बार्क र विष्णुस्वामी सम्प्रदायहरू
डा. बासुदेवलाल दास, पीएच.डी. सहप्राध्यापक, इतिहास विभाग ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस, वीरगंज निम्बार्क सम्प्रदायः— हिन्दू धर्मका सगुणोपासक वैष्णव सम्प्रदायमा एकजना प्रवत्र्तकको रूपमा निम्बार्कलाई लिइन्छ। यिनी तैलंग ब्राह्मण थिए तथा निम्ब नामक गाउँमा निवास गर्दथे। यिनको जन्मस्थान भारतको कर्णाटक राज्यको बेल्लारी जिल्लाको निम्बापुरलाई पनि मानिएको पाइन्छ। यिनको जन्म वैशाख महिनाको शुक्लपक्षमा तृतीया तिथिका दिन भएको भनिन्छ, यद्यपि यिनको जन्मको संवत् भने थाहा पाइएको छैन। विद्वान्हरूको विचारमा यिनको उदय रामानुजभन्दा पछिल्लो समयमा भएको थियो। यिनका पिताको नाम जगन्नाथ र माताको नाम सरस्वती थियो। यिनका शिष्यहरूले यिनलाई भगवान् विष्णुका सुदर्शन–चक्रको अवतार मान्ने गरेका छन्। यसरी नै एउटा अर्को स्रोतमा यिनको नाम निम्बादित्य रहेको तथा यिनीद्वारा प्रवर्तित वैष्णव सम्प्रदायको नाम निम्बार्क भएको भनिन्छ। यिनी यस सम्प्रदायका आदि आचार्य थिए एवं यिनलाई श्रीराधाको कङ्गनको अवतारको रूपमा समेत मानिएको देखिन्छ। निम्बार्कद्वारा वेदान्तपारिजातसौरभ ग्रन्थ रचित भएको थियो, जुन ब्रह्मसूत्र विषयक सङ्क्षिप्त
कुरोको चुरो- मर्निङ वाकिङ–२
मुकुन्द आचार्य मर्निङ वाक (प्रातःभ्रमण)को फाइदाहरूबारे बयान गर्दै जाँदा ‘स्वस्थानी’को भाषामा भन्ने हो भने हजार जिब्रा भएका शेषनागले र आजको भाषामा भन्ने हो भने सामाजिक सञ्जालको कुनै पनि जालले फाइदाहरूको नालीबेली लाउन सक्दैनस भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। मर्निङ वाककै क्रममा यौटा रोचक दृश्य देखा प¥यो। त्यो रोचक दृश्य पाठकका लागि पनि घोचक होला भनेर बताउँदैछु। यौटा राम्रो खाले पच्छिमा जातिको कुकुरले आप्mना मालिकलाई बलजप्mती वाकिङ गराउँदै थियो। त्यस कुकुर जातिमा यौटा झकास गुण थियो। एकाबिहानै ऊ आप्mनो मालिक वा माल्किनीलाई रोई कराई गरेर भएपनि घुमाउन लैजान्थ्यो। हो... त्यसैले हाम्रा नेपालीले उहिले नै भनेका रै‘छन्– ‘कुकुरजस्तो गुनी र ज्वाइँ जस्तो बैगुनी कोही हुन्न‘रे १ यो गुनी कुकुर आपूm सिक्रीमा बाँधिएर भएपनि मालिकलाई भने मर्निङ वाकमा लगेरै छोड्थ्यो। त्यसैले होला अचेल पच्छिमा देशहरूमा यौटा नयाँ उखानको उत्पत्ति भएको छ भन्ने सुनिन्छ। नयाँ खाले उखान यस्तो छ– ‘ओह माई गाड १ गिभ मी द हर्ट अफ अ डग १’ कुरोको चुरो के भने कुकुर मापाको गुनी हुन्छ। आपूmलाई जसले माया गर्छ, कुकुरले त
गतांकको बाँकी... केटाकेटीमा बनारसका ठगबारे कैयौं किंवदन्ती सुनेको थिएँ। हुनत यस पहिले पनि म बनारस नपुगेको होइन, तर त्यो युवाकाल थियो। कसैको शर्तभन्दा आप्mनै राजीमा हिंड्ने उमेर। खास बाधा बेहोरेको थिइनँ । अहिले त ठ्याम्मै हिंड्न नसक्ने सम्धिनी र जेनतेन आँट गरेर हिंड्ने धर्मपत्नी थिए। अरू त छँदै थिए, यात्रामा। हामी उत्रेको स्टेशन थियो, मुगलसराय। भारतमा मुगल बादशाहहरूको शासन भएको बेला बनारससम्म पुग्न बाटोमा पर्ने यो ठाउँमा कुनै धर्मशाला बनाइएकोले यस ठाउँको नाउँ मुगलसराय रहेको हुनुपर्छ। किनभने सराय भनेको फारसी भाषामा धर्मशालालाई भनिन्छ। र भनिरहनुपर्दैन, मुगलकालमा हिन्दुस्तानमा फारसी भाषाको चकचकी थियो। बनारस पुग्न अन्य साधनको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने भयो। त्यहाँबाट जीप, कार वा टेम्पो लिएर बनारस पुग्नुपर्ने । बनारससम्म पु¥याउने सवारी साधनबीच ठूलो दलाली हुँदो रहेछ । रेलमैं आइपुग्दा रहेछन्, टेम्पो, कार, रिक्शा आदिका चालकहरू। यति पैसा दिनुस्, बनारस पु¥याइदिन्छौं भनेर । नानाभाँति प्रलोभन र आकाश–पातालको दामसहित । यस कार्यको अभिभारा सम्धी शीतलजीले लिनुभयो। ककससँग के के कुरा गर्नुभयो थाहा भए